पुरुष र महिला को convergence धेरै चरणमा स्थान लिन्छ। पहिलो - यो मा, बाध्य छ दोस्रो प्रेम, प्रेम लागि तेस्रो र चौथो आवेग। पछिल्लो, चौथो, र यो मात्र संभव बीच बलियो सम्बन्ध छ। प्रेम कुरा यो मार्गदर्शक र यो सम्बन्ध कायम राख्न बल दिने, जीवन को एक विशेष आध्यात्मिक भाग हो, किनभने धेरै गाह्रो सधैं छ।
प्रेम, आवेग मा entrenched देखि, एक आवेग मा ripened यदि पारित गर्न सक्छ, अन्ततः, र यो प्रेम। सम्पत्ति प्रेम सम्बन्ध मा भ्रामक आवेग छ। तर, यदि यो हुन्छ, त्यसपछि यो पुरुष र महिला राख्न र तिनीहरूले अन्त अन्त मा गर्न झन् कठिन हुनेछ। पहिलो तीन चरणमा - बाल्यकाले एक चरण, वा, को क्रमिक बुढ्यौली को शिखर जो को आवेग छ, भन्नुहोस्। म यहाँ टी, प्रेम को एक परिभाषा दिन छु छैन गर्न।। म यसलाई केही शब्दमा भन्न गाह्रो छ भनेर विचार गर्न, तर यो विचार exhaustively सेन्ट एपी भन्छन्। पावलले कोरिन्थीहरूलाई / अध्याय 13 / पहिलो पत्र मा। आवेग, प्रेम र आवेग लागि जाँदा, त्यसपछि मलाई थप विस्तार गर्ने मा छोड गरौं।
जहाँ एक मानिस अवधारणा (भावना बुझ्न र उपस्थित हुन) अनुरूप ऊर्जा-हर्मोन अप wakes राज्य - त्यसैले, यो सबै उत्साह साथ सुरु हुन्छ। पछि आफ्नो बाहिर संसारमा एक वा क्षणमा आफ्नो भित्री संसार गर्न पत्राचार वा बरु, यसरी, एक मानिस उहाँलाई लागि भविष्यमा सभाहरूमा छवि गठन गर्ने एक हुन्छ। faceless र अक्सर उत्साह मात्र सामग्री भालु, एक तिर्सना, अघिबाटै जान्ने काम र sighs रूपमा व्यक्त गरे।
त्यहाँ कसैले वास्तविक आफ्नै संचित सम्भावित इच्छा तुलना ऊर्जा एक व्यक्ति द्वारा आएको हुँदा, कि आवेग प्रेम मा उत्तेजित गर्दछ। यो अवस्था प्रत्येक अन्य सिक्ने एक निश्चित प्रक्रिया तुलना गर्न सकिन्छ। प्रत्येक अन्य आपसी रहस्य, भरोसा मा निर्मित एक खोल्ने छ, त्यहाँ आशा र आशा, आकांक्षाओं र मनसाय दुवैलाई सम्बोधन छन्। भेट्न इच्छा, स्पर्श, राम्रो कुरा गर्न हेरविचार र आनन्द ल्याउन इच्छा बढ्दै। यो दुई साँचो उत्सव भनिन्छ गर्न सकिन्छ। संसारको प्रेमीहरूको वरिपरि केंद्रीकृत।
यदि यो हुन्छ, तर यो धेरै सम्भव छ तपाईं बन्न भन्ने समय तपाईं संग जोडिएको - सँगै, तपाईं पहिले नै मानसिक बल र आधार सँगै बस्न यौन ऊर्जा, जगाउन र सँभाल्नुहुनेछ भनेर "इन्धन" को एक प्रकारको सधैं अन्य व्यक्ति आफूलाई को आत्म-प्रकाश को प्रक्रिया मा उपस्थित जो विकास को आफ्नो कमी, समय। यो अवधिमा प्रकृति मा वसन्त रूपमा, दुर्भाग्य, र चाँडै नयाँ चरण, यो "साधारण" मानव प्रेम छ, निकै छोटो छ। प्रेमको तीन वा चार वर्ष पछि, यो तपाईं पूर्णतया फरक, गुणात्मक फरक, भावना आउँछ। यो अघिल्लो राज्य बाट रूपान्तरणहरूलाई, तर कहिले काँही, दुर्भाग्यवश, पकाना छैन र त्यसपछि, उत्कृष्ट मामला मा, तपाईं आफ्नो पछिल्लो लागि न्यानोपन र आदर मा रहने छ, र आफ्नो भूत र गुमाएका सबैभन्दा खराब तीता मा।
कहिलेकाहीं, यो प्रक्रिया गति र शक्ति धेरै छिटो, एक जस्तै प्राप्त छ थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया, नियन्त्रण बाहिर देखा जो। सँगै रहेको बानी पीडादायी हुन्छ, र हरेक पनि कठिन छ।
प्राप्त, व्यवस्थापन गर्न, र आज्ञा पालन गर्न बाध्य इच्छा - र त्यसपछि यो आवेग सुरु हुन्छ। कुनै पनि लागत मा फर्कन प्रेम। इच्छा आफ्नो पक्षमा सँगसँगै मा फरक बनाउन, कहिलेकाहीं, च्यातिन्छ, चीखें, भ्रष्टाचार, आरोप र दावा र थप छल, धूर्त, पनि meanness। आवेग धेरै सक्षम छ। आवेग प्रकृति यहाँ धेरै अनुहारहरू र शरीर विज्ञान, तर अझै पनि गैर-अनुपालन योजना मानिसहरू र तिनीहरूको व्यक्तिगत प्रकृति को महिला समावेश जो उनको लुकेको आध्यात्मिक त्रुटि, अझ छ। यो आवेग इच्छाधारी सोच, त्यहाँ नै स्थिति equalize कुनै शक्ति छ, किनभने सबै आफ्नो साधारण समस्या र, अप्रत्यक्ष हासिल जसबाट ससर्त नियम samoravnovesiya लागि अरूलाई blaming गर्न रिसोर्ट छ।
यो स्थिति को लागि छैन, यो छोड्न समय थियो अब स्पष्ट छ परिवार सम्बन्ध, , प्राणको खतरनाक वृद्धि गर्न गल्ती र आँसु मार्फत - र सबै भन्दा राम्रो मामला मा। यो प्रेम घृणा गर्न एक कदम हो भन्नुभयो छ, तर यो छैन। प्रेम कहिल्यै सुरुमा, आवेग र प्रभावकारी उत्सुकता र sensuality र निष्कपटता देखाउनुहुन्छ हुनत, र सबै उहाँले प्राण प्रेम गर्न चाहन्छ, तर यो केवल शुरुवात हो, रिस, अधिक घृणा, तर अक्सर आवेग गर्न वृद्धि दिन्छ ...
नदी सोख मा परिवार सम्बन्ध जहाज sails, प्रेम को ताल मा पतन आवेग को समुद्र मा आफ्नो जीवन लागि लड, र अन्त मा, प्रेम को सागर मा आउँछ। जहाज एक कप्तान र चालक दल छ, र यो सबै घटना को एक सार हो, उसलाई थप महत्त्वपूर्ण छ जसले तपाईंलाई तुलना गर्न सक्दैन।
एक मानिस उहाँले मात्र जहाज डुब्नु सक्दैन, तर पनि एक संयुक्त रोमाञ्चक बनाउनको लागि, स्टेरिड़ धारण र पाठ्यक्रम निर्धारण संसारभरि यात्रा परिवार जीवन मा।
महिला उनको "प्रभु," आफ्नो कप्तान, त्यो उहाँको सेवा गर्न, के रूप नाभिकहरु, rowers, महाराज वा boatswain खोज्छ विश्वास गर्दछन्। यो एक संयुक्त यात्रा मा कार्यहरू कार्य र सानो घर "सबै भन्दा राम्रो खाने" आफ्नो कप्तान रचनात्मक सेना कायम गर्न ल्याउँछ।
संसारको थाहा, जलयात्रा जहाज, तट र देश, अनुभव प्राप्त आफ्नो जीवनको धन र आनन्द सङ्कलन ...
यो ऐन मा ...
आफ्नो उपाय जारी, र त्यो आफ्ना सृष्टिकर्ता गर्न एक बनाउन दुई सिद्धान्तहरू को निष्ठा यसरी।
सायद तपाईं बस राम्रो डुङ्गा र आँधी अप आउने भूल छैन, र गरिब जहाज र शान्त तल जान सक्नुहुन्छ। र अक्सर, यो सँगै सेल यो कठिन यात्रा को लागि सहभागी उचित चयन निर्भर जारी गर्न एक अचम्मको मौका छ।
कसरी एक devichnik खर्च: एक सपना, वास्तविकता मा सम्बद्ध!
के रूपमा देखिन्छ, परिवार छ? परिवार, यसको विकास, सार को उद्भव को इतिहास। परिवारमा बच्चाहरु
केही सरल विचार: कसरी आफ्नो हातमा एक विवाह ग्लास सजाने
Agate विवाह - बलियो परिवारको प्रतीक
अर्थ संग विवाह उपहार। मूल विचार
बिहान चलिरहेको - राम्रो वा हानि? यो वर्तमान समस्या बारेमा थोडा
कला। 395 को नागरिक कोड को। विफलता मौद्रिक दायित्व लागि जिम्मेवारी
पत्थर ऊन - विनिर्देशों र समीक्षा। खनिज ऊन को घनत्व
खेल खण्डमा। "Stalker: खाली आकाश - शीत रक्त": fripley
पूर्ण असफलता मा गरिएका कि 14 पाक प्रयोग
चरण चरण पुस्तिका द्वारा: आफ्नै हातले एक कागज क्रेन कसरी बनाउने